March 27 ~ विज्ञान संसार
प्राणघातक हेपाटाइटिस 'बी’ के हो ?
एचआईभी/एड्सभन्दा सयौँ गुणा संक्रमणकारी र घातक हेपाटाइटिस 'बी' कलेजोको रोग हो। जुन हेपाटाइटिस 'बी' भाइरसको संक्रमणले एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ। यो रोग सरेका बिरामीहरूमध्ये ९० प्रतिशत बिरामीलाई आफै निको हुन्छ भने १० प्रतिशत बिरामीहरू दीर्घरोगी हुन्छन्। ती दीर्घरोगीमध्ये २०/३० प्रतिशत व्यक्तिहरू कलेजोको सिरोसिस तथा क्यान्सर रोगले मृत्युवरण गर्छन्। विश्वको जनसंख्याको एकतिहाइ अर्थात् दुई अर्ब व्यक्तिहरू जीवनमा एकपटक यसको संक्रमणबाट प्रभावित हुन्छन्। तर, ९० प्रतिशत व्यक्तिहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कारण आफँै निको हुन्छन्।
अहिले विश्वको ३५ करोड जनसंख्या हेपाटाइटिस 'बी'बाट ग्रस्त छ, जसमध्ये करबि ७८ प्रतिशत अर्थात् साढे २७ करोड रोगीहरू एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका छन्। अधिकांश एसियाली राष्ट्रहरूमा १० प्रतिशत जनसंख्या हेपाटाइटिस 'बी'का दीर्घरोगीहरू छन्। हेपाटाइटिस 'बी'बाट विश्वमा प्रत्येक वर्ष १० लाख व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। औसतमा प्रतिदिन २ हजार ८ सय व्यक्तिहरू, प्रतिघन्टा १ सय १५ व्यक्ति र प्रतिमिनेट करबि दुई व्यक्तिहरू हेपाटाइटिस 'बी'का कारण कलेजो फेलर, सिरोसिस वा क्यान्सर भएर मर्छन्। प्रत्येक वर्ष कलेजोको क्यान्सरबाट विश्वमा पाँच लाख व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ, तीमध्ये ३ लाख ६० हजार व्यक्तिहरू एसियाली राष्ट्रका हुन्छन्। एसिया, चीन, फिलिपिन्स अफ्रिका तथा मध्यपूर्व क्षेत्र हेपाटाइटिस 'बी' प्रकोपका क्षेत्रहरू हुन्, अहिले विश्वमा हेपाटाइटिस 'बी' र 'सी'ले ५० करोड व्यक्तिहरू संक्रमित छन्, जुन एचआईभी/एड्स -३ करोड ४० लाख)भन्दा १० गुण बढी हो। विडम्बना! यस रोगबारे यथेष्ट प्रचारप्रसार भएको छैन।
नेपालका सन्दर्भमा करबि ३ लाख १५ हजार व्यक्तिहरू हेपाटाइटिस 'बी'का दीर्घरोगीहरू छन्। जसमध्ये तिब्बती मूलका व्यक्तिहरू, मनाङका गुरुङ, शेर्पा जाति छन्। यस रोगबाट ग्रस्तमध्ये ७० प्रतिशत १५-४९ वर्ष उमेर समूहका छन्। जनसंख्याको ठूलो हिस्साले रक्त परीक्षण नगरेको हुँदा तथा दीर्घरोगीहरूमा केही वर्षसम्म कुनै लक्षण नदेखिने हुनाले यसको संख्या अझै बढिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
हेपाटाइटिस 'बी' भाइरस मान्छेको शरीरबाहिर करबि एक सातासम्म बाँच्न सक्ने तथा प्रतिमिलिमिटर रगतमा १० अर्बसम्मको संख्यामा रहन सक्ने भएकाले यो शीघ्र संक्रमण एवं प्रकोपजन्य रोग हो, जुन विश्वका प्राणघातक १० रोगहरूको सूचीमा पर्छ। अमेरकिाजस्तो विकसित राष्ट्रमा यस रोगबाट प्रतिवर्ष करबि चार हजार व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने अपि|mका/एसियाका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा १० प्रतिशत जनसंख्यामा यसको प्रकोप भएको भयावह तथ्यांक छ। युरोपमा समेत १ करोड ५० लाख व्यक्तिहरू हेपाटाइटिस 'बी'का दीर्घरोगीहरू छन्। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा नेपालमा दुईदेखि आठ प्रतिशत जनसंख्या यस रोगबाट पीडित छ भने श्रीलंकामा एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या यस रोगले आक्रान्त छ।
उमेरका आधारमा यस रोगबाट संक्रमण भएका १० नवजात बच्चामध्ये नौ, पाँच वर्षमुनिका एक सय बालबालिकामध्ये ३० र एक सय प्रौढमध्ये दुई जना दीर्घरोगी हुन्छन्। तथ्यांकका आधारमा सबैभन्दा बढी १०-२४ वर्षका व्यक्तिहरूमा यस रोगको संक्रमण पाइएको छ भने महिलामा भन्दा पुरुषमा हेपाटाइटिस 'बी'को संक्रमण धेरै पाइएको छ।
सामान्य प्रयोगशालामै रक्तपरीक्षण गरे यस रोगको निदान हुन्छ। हेपाटाइटिस 'बी'को हालसम्म कुनै प्रभावकारी उपचार छैन। तर, यो लाग्नुभन्दा पहिले हेपाटाइटिस 'बी' विरुद्धको खोप तीन मात्रा -०, १, २ महिनामा वा ०, १, ५ महिनामा) लगाउनाले ९५ प्रतिशत रोकथाम हुन्छ। यो खोपबाट रोकथाम हुने भएकाले प्रत्येक उमेरका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनुपर्छ। हाल नेपालमा पनि बच्चाहरूलाई अन्य खोपसँगै हेपाटाइटिस 'बी'विरुद्धको खोप दिने गरएिको छ। तर, यसको पहुँच सहरी तथा विकसित क्षेत्रमा मात्र सीमित छ। यसको प्रभावकारी खोप भएर पनि विश्वमा प्रति ३०-४५ सेकेन्डमा एक जनाको यस रोगबाट मृत्यु भइरहेको छ।
जसलाई हेपाटाइटिस रोग लागेको छ, उनीहरूलाई यो संक्रमण भएको थाहा नै हुँदैन। तसर्थ, हेपाटाइटिस 'बी'लाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ। हेपाटाइटिस 'बी' संक्रमणको समयमै निदान र रेखदेख भए रोगीको तुरून्त मृत्यु हुँदैन। हेपाटाइटिस 'बी'बाट कलेजोको क्यान्सर तथा सिरोसिस हुन करबि २० वर्ष लाग्छ। उदाहरणका लागि सन् १९८२ मा कुल्ली फिल्मको सुटिङ्का क्रममा गम्भीर घाइते भएका बलिउडका विश्वप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई अति आकस्िमक कक्षमा राखेर दुई सय जना व्यक्तिले दिएको रगतमध्ये ६० पोका रगत दिइएको थियो। तर, एक जना हेपाटाइटिस 'बी' संक्रमित व्यक्तिको रगत उनलाई दिइएकाले हाल उनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कलेजोको सिरोसिस भएको छ। केही वर्ष पहिले मात्रै उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा यस्तो पाइएको हो।
सन्तुलित आहार, भाइरसविरुद्धको औषधीको प्रयोग, रक्सी तथा चुरोटको त्याग, सागपात, फलफूल फाइवरयुक्त र प्रशस्त भिटामिन पाइने खाना तथा नियमित व्यायाम आदिबाट कलेजोको सिरोसिस फेलर तथा क्यान्सर हुने अवधिलाई लम्ब्याउन सकिन्छ। हेपाटाइटिस 'बी'का दीर्घरोगीले आफैँमा बिरामी महसुस गर्दैनन् तर अरूलाई रोग सार्न र आफँैमा कलेजोको क्यान्सर गराउन खतरनाक हुन्छन्। तसर्थ, अभियानकै रूपमा खोपको अनिवार्यता र निदानका लागि सम्बन्धित निकायहरू तत्पर हुनुपर्छ। यो रोग लागेका ३५ करोड व्यक्तिहरूलाई खोप दिएर रोकथाम वा निको पार्न सकिँदैन। तसर्थ, अबको रणनीति भनेको रोग नलागेका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई खोप दिने र रोग लागेका व्यक्तिहरूमा चेतना ल्याई अरूलाई रोग सार्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन।
-डा॰ रवीन्द्र पाण्डे (स्वास्थ्य विशेषज्ञ)
सर्वेक्षणमा य स्तो
डा॰ रवीन्द्र पाण्डेजीले काठमाडौँका विभिन्न माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत ३ सय ८५ जना विद्यार्थीसँग २८ वटा प्रश्नमा गरेको क्रस सेक्सनल अध्ययनबाट हेपाटाइटिस 'बी'को चेतनास्तर यस्तो देखियो :
संक्रमित व्यक्तिसँग असुरक्षित यौनसम्पर्क गरेमा।
संक्रमित रक्तदाताबाट रगत लिएमा।
सामूहिक रूपमा एउटै सुईको प्रयोग गरी लागूपदार्थ सेवन गरेमा।
शरीरमा टाटु बनाउँदा नाक-कान छेड्दा वा एक्युपञ्चर गर्दा एउटै सुई वा औजारको प्रयोग गरेमा।
संक्रमित व्यक्तिले दाँत माझ्ने ब्रस, ब्लेड, कानको रङि, नङ काट्ने सामग्री प्रयोग गरेमा।
कपाल वा दाह्री काट्दा पर्याप्त सफाइ नभएमा।
गर्भवती आमाबाट आफ्नो शिशुमा।
संक्रमितले चपाएको चुइगम अर्को व्यक्तिले खाएमा।
संक्रमित व्यक्तिले खाना चपाएर बच्चालाई खुवाएमा।
संक्रमित व्यक्तिले टोकेमा आदि।
मांशपेसी जोर्नी वा पेट दुख्ने।
पखाला लाग्ने, वान्ता हुने।
गाढा रङको पहेँलो पिसाब देखिने।
छाला, आँखा, जिब्रो पहँेलो हुने।
सुरक्षित तथा धेरै जनासँग यौनसम्पर्क गर्ने।
रक्तसँग काम गर्नुपर्ने वा बिरामी स्याहार्नुपर्ने जस्तै स्वास्थ्यकर्मी।
नसाबाट लागूपदार्थको सुई लिने।
हेपाटाइटिस 'बी' प्रकोप क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने।
पटक-पटक दातबाट रगत लिनुपर्ने बिरामी ।
हेपाटाइटिसको खोप सबै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा लगाउने।
रक्तदान गर्ने व्यक्तिको रगत परीक्षण गर्ने। रक्तदाताको विगतको यौनिक व्यवहारबारे जानकारी लिने।
धेरै जनासँग यौनसम्पर्क नगर्ने । गर्नुपर्ने अवस्थामा कन्डमको सही तरकिाले सधैँ प्रयोग गर्ने।
नवजात शिशु तथा किशोर-किशोरीलाई अनिवार्य खोप दिने।
नसाबाट लागूपदार्थ सेवन नगर्ने वा एउटा सुई एक जनाले मात्र प्रयाग गर्ने।
तिखा सुई वा औजारलाई विसंक्रमित पञ्जा लगाएर प्रयोग गर्ने र शंकास्पद भुईं वा ठाउँलाई राम्रोसँग सफा गर्ने।
संक्रमित व्यक्तिले चपाएको खाना बच्चालाई नदिने।
व्यक्तिगत सामग्रीहरू जस्तै- ब्लेड, दाँत माझ्ने ब्रस, इयर रङि्, नङ काट्ने सामान आदि अर्को व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने।
घाउलाई राम्रोसँग पट्टीले बाँधेर छोप्ने।